(Dhageyso) Dowladda Puntland oo markii ugu horeysay lasoo wareegaysa xarunta xog aruurinta biyaha iyo dhulka Soomaaliya. | puntlandi.com
(Dhageyso) Dowladda Puntland oo markii ugu horeysay lasoo wareegaysa xarunta xog aruurinta biyaha iyo dhulka Soomaaliya.
Wasiirka deegaanka iyo duurjoogta dowladda Puntland Cali Cabdulaahi Warsame ayaa sheegay in markii ugu horeysay burburkii dowladdii dhexe kadib ay dowladda Puntland lasoo wareegayso xarunta xog aruurinta biyaha iyo dhulka Soomaaliya oo haatan laga maamulo magaalada Nairobi.
Shir ka dhacay magaalada Garowe oo ay yeesheen qaar katirsan hay’addaha dowladda Puntland iyo hay’addaha FOA iyo Swalim, ayaa lagu gorfeeyay in Puntland laga sameeyo xarun weyn oo lagu aruuriyo, laguna faafiyo macluumaadka ku saabsan biyaha iyo dhulka Puntland.
Dr. Cali Cabdulaahi ayaa sheegay dowladda Puntland inay intii muddo ah ku dedaalaysay sidii loogusoo wareejin lahaa wixii macluumaad ah oo ku saabsan dhulka Puntland. Wuxuu sheegay wasiirku inaanay suurtagal ahayn in wax kasta oo Puntland u baahan tahay loo aado Nairobi.
Wasiirka deegaanka wuxuu sheegay inay haatan hay’addaha Puntland ee qaabilsan biyaha iyo dhulka ay kuwada midaysan yihiin ka wada shaqeynta arrintaan, taasina wuxuu sheegay inay soo afjarayso mar-marsiiyihii hay’addaha caalamiga ah ee ahaa inay Puntland u diyaarsanayn la wareegida maamulka xog aruurinta biyaha iyo dhulka.
Halkaan ka dhageyso codka wasiirka deegaanka oo wareysi siiyay Radio Sahan.
Wasiirka deegaanka Puntland Dr. Cali Cabdullaahi